Shiinaha oo ugu Baaqay Kuuriyada Waqooyi in ay Joojiso Tijaabada Hubkeeda
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Shiinaha ayaa ugu baaqay Kuuriyada Woqooyi in ay go’aan fiican ka qaadato sidii ay u hakin lahayd tijaabada hubkeeda niyuukleerka iyo gantaaladeeda ridada dheer.
Wang Yi ayaa hadalkaasi jeediyay kaddib markii uu Manila kula kulmay ergayga ugu sareeya Kuuriyada woqooyi Ri Hong-Yo.
Hadalkiisa ayaa ku soo beegmayo saacado kaddib markii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey uu xayiraado hor leh ku soo rogay Pyongyang.
Kuuriyada Woqooyi ayaa si kulul uga jawaabtay xayiraadahaasi, waxa ayna sheegtay in Mareykanku uu dhex dabaalan doono bad holceysa.
Wargeys uu maamulo xisbiga talada haya ayaa waxa uu sheegay in haddii xukuumadda Washington ay ka fogaan weydo siyaasaddeeda naceybka ku saleysan ee ka dhan ah Pyonguyang, doorka mareykanka waxa uu noqonayaa in uu isaga is burburiyo oo kaliya, waxaana mareykanku uu isku dhex tuuri doonaa bad holceysa oo aan la maleysan karin.
Gelinkii dambe ee sabtida ayaa golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey waxa uu meel mariyay qaraar lagu mamnuucayo waxyaabaha kuuriyada Woqooyi ay dibadda u dhoofiso isla markaana xaddidaya maalgashiga dalkaasi, qaraarkaasi oo ay ku muteysatay tijaabadii is-xig-xigtay ee gantaalada Pyongyang.
Tallaabooyinkan adag oo mareykanka uu soo hindisay ayaa waxa ay gebi ahaanba mamnuucayaan dhoofinta dhuxusha, birta, macdanka, iyo kalluunka kuuriyada woqooyi, xayiraadahaasi oo ay ka dhalan karto in dalkaasi uu lumiyo qiyaastii hal bilyan oo doolar.
Kuuriyada Koonfureed ayaa aad u soo dhaweysay xayiraadahaasi ka dhanka ah Pyongyang.